Why peace building in Myanmar needs to include women
Interview with Phyu Phyu Lin
An interview with Nang Phyu Phyu Lin, the Chair of the Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process
PK: What made you personally get involved in the Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process?
ကျွန်မက ဂျန်ဒါအကြံပေးတစ်ဦးအနေနဲ့ အမျိုးသမီးများအခွင့်အရေး၊ အမျိုးသမီးများကဏ္ဍစုံတွင် ပါဝင်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၀)နှစ်ကျော်ကတည်းက ဖွံ့ဖြိုးရေးလောကမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်လာခဲ့သူပါ။ ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးကွန်ယက်တွေ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်မဲ့အဖွဲ့တွေစုစည်းပြီး စုပေါင်းညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါ ဒီစုစည်းမှုဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အတွက် အင်မတန်မှ အကျုိးရှိမဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ ခံယူတာမို့ AGIPP မှာ တက်ကြွစွာနဲ့ပါဝင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ လူတစ်ဦး၊ အဖွဲ့တစ်ခု၊ လူအမျိုးအစားတစ်ခုတည်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကဏ္ဍ မဟုတ်ပါဘူး။ လူသားအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမို့လို့ လူသားအမျိုးအစားအားလုံးမခွဲခြားပဲ ပါဝင်ရမဲ့အရာတစ်ခုပါ။ တိုင်းပြည်အဆင့်သာမက မိသားစုအတွင်းမှာတောင် ငြိမ်းချမ်းမှု သင့်မြတ်မှုမရှိရင် ဘယ်လိုမှဖွံ့ဖြိုးမှု၊တရားမျှတမှုဆိုတာရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် တရားမျှတစွာ ဖွံ့ဖြိုးတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ဖို့ အားလုံးအတူတကွပါဝင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ မရှိမဖြစ် အရေးကြီးပါတယ်။
Can you give an example from your experience of how this can change the dynamics of peace processes?
AGIPP ကိုပဲဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင် အရင်တုံးက ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်နေသူအဖွဲ့တွေဟာ အမျိုးသမီးအရေး တန်းတူညီမျှရေးရှုထောင့်က တွေးခေါ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဟာ အမျိုးသမီးအရေးတန်းတူညီမျှရေးကိုလုပ်ဆောင်နေတဲ့ အဖွဲ့တွေလောက်မရှိသလို အမျိုးသမီးအဖွဲ့များရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို တတ်ကျွမ်းနားလည်မှုဟာလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတစိုက်မတ်မတ်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အဖွဲ့တွေလောက် မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် အခုလို ပူးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ အချင်းချင်းအသိပညာတွေ မျှဝေပြီးသားဖြစ်သလို မျှတတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ဖြစ်လာအောင် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အကြံဥာဏ်တွေကို သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများကို ထိရောက်စွာပေးလာနိုင်ပါတယ်။ အကြံပြုစာတွေကိုလည်း ဒေါင့်စုံ ကဏ္ဍစုံက ရေးသားထောက်ပြတင်ပြနိုင်တဲ့အခါမှာ အစိုးရဖက်ကရော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကုိုင်တွေဖက်ကရော အသိမှတ်ပြုမှုကို ရရှိလာပါတယ်။ ဥပမာ - NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကို AGIPP ကို နေရာပေးဖိတ်ကြားခြင်းမျိုးပြုလုပ်လာပါတယ်။ ဒီကတစ်ဆင့် Joint Monitoring မှာ အမျိုးသမီးတွေကို CSO တွေကိုထည့်သွင်းပေးဖို့ အကြံပြုစာတွေကိုပေးတဲ့အခါ အသိမှတ်ပြုမှုတွေရရှိလာပါတယ်.
Who is the most important target group you are focusing on for the campaign/project?
၁။ ငြိမ်းချမ်းရေးမှာ ဦးဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတော်အစုိုးရ
၃။ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလုပ်ဆောင်နေသောအဖွဲ့အစည်းများ
၄။ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာဒေသရှိ ကဏ္ဍစုံမှသူများ
၅။ နယ်ပယ်ကဏ္ဍအသီးသီးမှ ခေါင်းဆောင်များ
၇။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို စိတ်ဝင်စားသူ၊ ပံ့ပိုးသူ နိုင်ငံတကာမှအဖွဲ့များ
What about more widely in the aid sector, what can people working in aid agencies do to support the campaign?
AGIPP မှာ အဖွဲ့ဝင်တွေ သဘောတူချမှတ်ထားတဲ့ ပေါ်လစီရှိပါတယ်။ Mission, Vision တွေ Strategic objective တွေရှိပါတယ်။ ဒါတွေနဲ့ သဘောတူညီကိုက်ညီရင် ပံ့ပိုးသူများက ကူညီလို့ရပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။